Ibhuloho Lekhishi Lasebhuloho Elinokudonsela Phansi | I-Bridge Kitchen ompompi
Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Bridge Kitchen ompompi / WOWOW 2-Handle Bridge Ikhishi ompompi Nge Side Sprayer, 8 Inch Centerset Rustic Ikhishi ompompi
WOWOW 2-Handle Bridge Ikhishi ompompi nge Side Sprayer, 8 Inch Centerset Rustic Ikhishi ompompi
Kwenziwe ngethusi eliqinile, le faizets ekhishini ekhanyayo yama-vintage ekhishini ifaka uhlelo lwe-ceramic disk cartridge olunikezwa emaphethelweni ama-4 ahlala isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, iqukethe i-sprayer eseceleni yethusi yamandla okuhlanza angeziwe nenzuzo. Izibambo zayo ezinesibindi nezokugeza geometry zinikeza ukuthinta kokugcina kufenisha ekhishini engaphelelwa isikhathi.
23115A1 imiyalo yokufaka
Isikebhe ekhishini seBrass 23115A1
Isikulufu sokukhanya ekhishini se-classical yethusi le-WOWOW sibonisa ukwakheka kwekhishi lakho ngokubukeka kwevintage. Izonezela ukuthinta okumangazayo ekhishini lakho lokuhlobisa. I-WOWOW yaziwa emhlabeni wonke ngemiklamo yayo enesibindi. Abaqambi be-WOWOW benza umehluko emakethe. Ngokushesha uyakubona lokhu lapho ubona ukwakheka kwalesi isikulufu esikhethekile sokudla sasekhishini. Imiklamo ye-WOWOW ihlukanisa ngokwanoma yimuphi omunye umklamo, njengoba i-WOWOW yazi njengoba kungekho okunye ukuthi amakhofi asekhishini engeza okuthile okukhethekile kunoma yikuphi ukukhishwa kwekhishi. Yonke imishini yasekhishini ye-WOWOW ingavela ngqo kunoma yimuphi umagazini okhethekile mayelana nemiklamo ekhishini yokunethezeka nokunethezeka.
Le faucet yasekhishini lethusi le-WOWOW ifaka umklamo wakudala obunjiweyo obunji bawo. Ukuqeda isidina se-nickel kunezela ukuthinta kokubukeka ekhishini lakho. Lesi sakhiwo esihle nesitayela esisezingeni eliphezulu zihlangana ngokuvumelanayo kuleli bhuloho lokudonsa isikebhe sekhephu elikhethekile le-WOWOW. Akusizi ngalutho ukuthi le faucet yasekhishini lethusi yaziswa ngabathengi abavela emhlabeni wonke.
Isikhiphi sekhishi lebrashi nge-sprayer eseceleni
Isici esimangalisa kunazo zonke isikebhe ekhishini lethusi le-WOWOW isifutho saso sasohlangothini. Amakhethini amaningi ekhishi anikeza ukudonsa okuhlanganisiwe phansi noma ukukhipha i-spout. Lesi siponji sivame ukufakwa efenisha ekhishini uqobo. Kodwa-ke lesi sifutho esisehlangothini sibekwe eceleni ukuthi singayekeleli ukusebenza ngokuphelele. Okokuqala, ngalesi sifutho sokukhipha esihlukile unganweba indawo yakho yokusebenza kakhulu. Ifaka i-hose yamanzi engama-intshi angama-60 engakhulisa indawo yakho yokusebenza ngo-30 inch. Lokhu kuhle kakhulu lapho ikhishi lakho lifakwe echibini elisinki eliphindwe kabili. Okwesibili, une-spout ehlukile yefenisha ekhishini lethusi uqobo, ukuze isiponji ngasinye singafeza umsebenzi waso ohlukile kahle.
I-sprayer eseceleni ingasebenza kalula ngesandla esisodwa. Umbhobho wamanzi wensimbi engenasici ungakhipha kalula bese ubuyisa ngokuzenzakalelayo esimweni sawo sokuqala. Ukugeleza kwamanzi kungavulwa ngokuchofoza okulula kwenkinobho engemuva, ebekwe kahle eceleni kwesikhupha se-sprayer eseceleni. Akudingeki wenze izindlela eziyinkimbinkimbi ukuze uthole ukusakazwa kwamanzi okufunayo. Abaklami be-WOWOW nakanjani bake bacabanga ngokwakhiwa kwe-ergonomic futhi, ukukunikeza isipiliyoni esingcono kakhulu ongasithola. Ungakhetha noma amanzi ashisayo noma abandayo aqhamuke kuleli hlumela le-sprayer. Abantu abaningi bakhethe ukuthola amanzi abandayo, kepha amanzi ashisayo angaba inketho. Ikakhulu uma uzosebenzisa lesi sifutho sasohlangothini ikakhulukazi ukuhlanza isibonelo. Ifaka isifutho esinamandla sokuhlanza kalula amabhodwe angcolile namaphini.
Phatha kabili isembozo ekhishini lethusi
Isikebhe ekhishini lethusi ngokwaso sakhiwe ngendlela yokubamba. Lokhu kukuvumela ukuthi ulawule ngqo ukugeleza kwamanzi abandayo nokushisayo kalula. Izibambo zingasebenza kahle ngaphandle kokushayisana noma i-backlash. Uqaphela ikhwalithi yezibambo kanye nemishini ngemuva kwazo ngokushesha. Lokhu nakanjani kwenziwa ngezinto ezisezingeni eliphezulu. Njengoba usebenzisa ikhishi lakho ekhishini njalo, okungenani izikhathi eziningana ngosuku, ufuna nje ukuqiniseka ukuthi isipiliyoni sakho sihle.
Ngaso sonke isikhathi uma usebenzisa isikebhe sakho sasekhishini. Kungakhungathekisa kakhulu ukucasulwa ukusebenza kwesikhico sakho sasekhishini nsuku zonke, amahlandla amaningi ngosuku. Ukuphinda nje ukhumbule ukuthi wenze isinqumo esingalungile ukhetha isikulufu sakho sokudla ekhishini. Nge-WOWOW nakanjani uzokhunjuzwa ngokukhetha okuhle owenzile. Lesi sipiliyoni asithinteki, futhi siyaqiniseka ngokuzayo ukuthi uzokhetha i-WOWOW futhi.
Isikhiphi esisezingeni eliphakeme lasekhishini lethusi
Umpompi wekhishi wethusi one-sprayer eseceleni wenziwe ngethusi eliqinile ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi nokuqina kwayo kuyikho kokubili. Futhi ukuqedwa kwekhwalithi ephezulu kuqinisekisa ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sakho singamelana nokungcola noma ukugqwala. Lokho nakanjani kungaba yimfucuza lapho ukhetha umpompi wasekhishini obungeke ube namazinga wekhwalithi afanayo. I-WOWOW idlulela ngaphezu kwawo wonke amazinga wemboni futhi idlula cishe noma iluphi uhlobo lwe-A.
Ngaphandle kwalokho isikebhe ekhishini lethusi senziwe ngethusi eliqinile, le faipits ekhishini enhle yesihlahla somvini futhi ifaka uhlelo oluhle kakhulu lwe-ceramic disk cartridge. Lolu hlelo luqinisekisa ukusebenza okuphezulu kwempilo yakho isikebhe sakho sasekhishini lethusi. Ikhwalithi kufanele ibe isici esiyinhloko sethiphu ekhishini lakho, ngoba ukuntuleka kwekhwalithi kungadala ukuphazamiseka okuningi nokucasulwa. Lokho kufanele kuvinjelwe ngaso sonke isikhathi, ngoba akudingekile ukuthenga izitshulu zekhishi zekhwalithi encane. I-WOWOW ifakazela ukuthi ungathola ikhwalithi ephezulu ngentengo engabizi. Akusizi ngalutho I-WOWOW yaziwa emhlabeni wonke ukuthi inikele ngenani eliphakeme kakhulu lemali ngokuqondene nezicishi zasekhishini.
Wonke amakhasimende we-WOWOW akhombisa ukufinyelela esiphezulu. Akugcini lapho ukuthi ifenisha ekhishini ngayinye iza nekhithi yokufaka ephelele. Ngale ndlela ungafaka isikebhe sakho ekhishini lethusi ngokwakho kalula, ngaphandle kokusebenzisa amanye amathuluzi. Cabanga futhi ngamagilavu ​​akhethekile wokufaka ukwenza isipiliyoni sakho sokufaka sibe esihle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-WOWOW iphatha abathengi bayo njengenkosi, ukuze ibuye ngaso sonke isikhathi sokuphila kwabo konke lapho bedinga iphenti. Akusizi ngalutho i-WOWOW inamakhasimende amaningi abuya emhlabeni wonke athembekile kulolu hlobo. Lokhu kutholakala futhi ngokusebenza kwekhasimende okuhle kakhulu.
Ukudwebela inani lemali esikunikeza lona, ​​u-WOWOW akesabi ukukunikeza isikhathi sewaranti seminyaka emihlanu. Abahlinzeki abaningi, ngisho nama-A-brand, bavele banikeze iwaranti yonyaka ongu-5. Uma umpompi wakho wasekhishini ungonakala ngonyaka wesibili, kungaba yingozi yakho uqobo. Futhi kuzofanele uphinde uthenge ompompi abasha basekhishini. Kwa-WOWOW asikutholi lokhu kwenta nhlobo, njengoba ompompi bekhishi bekhwalithi kufanele okungenani bahlale iminyaka engu-1. Kungakho i-WOWOW ikunikeza lesi sikhathi-sewaranti esingenankinga kulokhu okungaphansi kweminyaka engu-5. I-WOWOW iqinisekile ngombhobho wayo wasekhishini wethusi, ukuthi ikunikeza nensizakalo yokubuyisa yezinsuku ezingama-5. Uthola imali yakho, imali ebuyiswayo egcwele, lapho ubungeke uhlabeke umxhwele ngenani lemali olithola ngepayipi lekhishi lethusi le-WOWOW. Lesi siqinisekiso sokubuyiselwa imali sifakazela ukwethemba kwethu ompompi wethu wasekhishini wethusi!
Izinzuzo zompompi wekhishi lethusi ngamafuphi:
• Hlukanisa i-sprayer eseceleni
• I-nickel eboshwe ngokuqondile
SKU: 23115A1 Categories: I-Bridge Kitchen ompompi, Ikhishi Faucets Tags: I-8 intshi, bridge, Vintage
19.25 x 13.75 x amasentimitha angu-2.9